Shwe Sar – Page 499 – Shwe Sar
Homepage / Shwe Sar
သား သမီး ရတနာ လို ချင် လျှင်
သားအိမ်အားကောင်းပြီး သားအိမ်အတွင်းမှာ ရှိသော အပုပ်အစပ်ကင်းစင်စေသော ဓတ်စာလေးပြောပြချ ပါတယ် အမဲရိုးနဲ့လျှားစောင်း လက်ပက်ကိုချက်စားရမှာပါ အရင်ဆုံးအမဲရိုး ကို ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူထောင်းပြီး ပြုတ်ပါ လျှားစောင်း လက်ပတ် 5. ပြားကိုဘေးက ဆူးတွေဖယ်ပြီးအတုံးသေးလေးတွေလှီးပါပြီးရင်အချွဲကုန်တဲ့ထိရေဆေးပါ အိုးသပ်သပ်နဲ့5မိနစ်ပြုတ်ပါ။ […]
ခုလိုကိုဗစ်ကာလလေးမှာ ပရိသတ်တွေ ကို အိမ်မှာပဲနေပြီး အစစ အရာရာ ဂရုစိုက် ဖို့ပြောလိုက် တဲ့ ထက်ထက်ထွန်း
ချစ်ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဖက်ရှင်လန်းလန်းလေးတွေ ဝတ်ဆင်တတ်ပြီး အလှမယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ ထက်ထက်ထွန်းကိုတော့ ပရိသတ်ကြီး ချစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သူမဟာ အလှမယ် မော်ဒ ယ် တ စ်ဦးအဖြစ် ဝင်ရောက်လာပြီး ယခုချိန်တွင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ရိုက်ကာ သရုပ်ဆောင်လောကသို့ ဝင်ရောက်လာပြီး ပရိသတ်အသိမှတ်ပြုခံထားရတဲ့ မော်ဒယ်မ […]
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ ကွမ်းစားလို့ ရပါသလား။ ကွမ်းစားမိရင် ကလေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသလားရှင့်။ A. ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားရင် မွေးလာတဲ့ကလေးလေးဟာ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ကွမ်းစားတာက […]
ထမ င်းရည် မှ ပေးသော အလှ အပနှင့် ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးကျေးဇူး များ
ထမင်းရည်ကို ဆံပင်အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့် အသားအရေ စိုပြေစေရန်အတွက် ရှေးပဝေ သဏီ ကတည်းပင် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ ထမင်းရည်ဟာ လူတို့အတွက် ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ ကျန်းမာရေး အထောက်အကူပေးနိုင်တာကို ယနေ့ခေတ် လူအတော်များများ သိရှိထားကြပါတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ထမင်းရည်ကို […]
ပရိသတ်ကြီးရေ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းယွန်းက အကယ်ဒမီရွှေကြိုမှာ အားဖြည့်ပါဝင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာနယ်ပယ်ထဲကို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လျှောက်လှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ အနုပညာလှုပ်ရှားတွေအနေနဲ့ ကြော်ြ ငာတွေအပြင် Music […]
တွဲကျလာသော ရင်သား များ ကို အရင် လိုပြန်လည် တင်းရင်းစေနိုင် မည့်နည်း လမ်း များ
နို့တိုက်ရတာ၊လေ့ကျင်ခန်းလုပ်တာ၊အမျိုးသမီးများသွေးဆုံးချိန်နဲ့အ၀လွန်တာတွေကြောင့် ရင်သားတွဲကျတာတွေဖြစ်ပေါ် တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကို ကူညီပေးနိုင်မယ့် သဘာဝနည်း နဲ့ရင်သား ပင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ (၁)ကြက်ဥအနှစ်၊ဒိန်ချဉ်နှင့်ဗီတာမင်အီးအဆီ ကြက်ဥအနှစ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ဗီတာမင်အီးအဆီလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းနဲ့ဒိန်ချဉ်လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဇွန်းတို့ကို ဖျော်စက်ထဲမှာ ရောပြီးမွှေပါ။ပျစ်သွားတဲ့အထိ မွှေပါ။ပြီးရင်တော့ ရင် သားေ ပ်ါမှာ လိမ်းပေးပြီး မိနစ်(၃၀)ကြာအောင်ထားပါ။ပြီးရင်တော့ […]
အမိုက်စား တင်သားအလှပေါ်လွင် အောင် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေတင်ပေးလိုက်တဲ့ မေရတီဇော်
ထိပ်ကပ် နာ ရှိ လျှင်
ထိပ်ကပ်နာ ဆေးနည်း ကျွန်တော် ထိပ်ကပ်နာ ဖြစ်နေတာ ၅. နှစ်လောက် ရှိနေပါပီ ။ ဘယ်ဆေးနဲ့မှ မသက်သာခဲ့ပါဘူး ဒန့်ဒလွန် အမြစ်ကိုသွေးပီး လည်ပင်းမှာလိမ်းကြည့်ပါ ။တကယ် သက်သာပါတယ် ။ နှာခေါင်းပွင့်တယ် ချွဲမထတော့ဘူး နေရတာ […]
ပွေးနှင့် ယားနာ အမျိုးမျိုး တို့ အ တွက်
ယားနာအမျိုမျိုးနှင့် ပေါင်ခြံ ၊ပွေးပေါက်ပျောက်ဆေး ၁။ ငရုတ်ကောင်း ၅ မူးသား ၂။ ပရုတ်၂ လုံး။ ငရုတ်ကောင်း ၅မူးသားကို အိုးသန့်သန့်ဖြင့်လှော်ပရုတ်လုံး ၂ လုံးနှင့်ရောထောင်း ။ ရလာသည့်ဆေးမှုန့်ကို အုန်းဆီနှင့်ဖျော်လိမ်းရပါသည်။ ဝဲနှင်းခူးဆိုလျှင် ရေနံချေးနှင့် […]